Matongerwo eNyika, 30 Chikunguru 2018
Muvhuro 30 Chikunguru 2018
Chikunguru 30, 2018
Zec Yomhang'arira VaMnangagwa naVaChamisa kuMapurisa
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission, Amai Priscilla Chigumba, vati vaendesa mazita evanhu vaviri kumapurisa avo vasina kuvadoma nemazita.
Vanhu Vanovhota Murunyararo muZimbabwe
Vakawanda vevavhota mudunhu reChirumhanzu-Zibagwe riri muMidlands pamwe nemuKadoma mudunhu reMashonaland West vanoti vafadzwa zvikuru nerunyararo rwanga rwuripo pazuva rekuvhota.
Mutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa, Vanovhota kuKwekwe
Mutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa, vavhota pachikoro cheSherwood Park pedyo nepurazi ravo kuKwekwe vachiti vanotarisira kuti munyika mucharamba muine runyararo sarudzo dzapera.
Mutungamiri weMDC Alliance, VaNelson Chamisa, Vanovhota muKuwadzana
VaChamisa vavhota pachikoro ichi apo vanhu vanga vari mumitsetse vabva mumitsetse iyi vachimhanyira kuti vaone VaChamisa ndokuzodzokera havo kunovhota VaChamisa pavanga vaenda.
Zec Inoti Yakagadzirira Zvakakwana kuMashonaland West
Zimbabwe Election Commission, ZEC, mudunhu reMashonaland West rinoti rakagadzirira zvakakwana sarudzo yanhasi.
Hurumende Inobvisa Mauto Anochengetedza VaMugabe?
Mashoko atiri kutambira anoti hurumende yabvisa mauto anochengetedza pamba pevaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe kuBlue Roof, kuBorrowdale.
Zimbabwe Peace Project Yokurudzira Vanhu Kuvhota Murunyararo
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Peace Project, Muzvare Jestina Mukoko, vanoti zvakakosha kuti vanhu vabude nehuwandu hwavo nhasi kuti vaende kunovhota sezvo iri kodzero yavo.
VaMugabe Vokatyamadza Vakawanda neKuramba Kutsigira VaMnangagwa
Vachitaura nevatori venhau kumba kwavo kuBorrowdale muHarare kunozivikanwa nekuti Blue Roof nezuro, vaimbova mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vakati havasi kuzovhotera mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vari kutungamira Zanu PF parizvino
Chikunguru 28, 2018
VaChamisa Vanoti MDC Alliance Icharakasha VaMnangagwa neZanu PF Yavo neMuvhuro
Mutungamiri weMDCAlliance, VaNelson Chamisa, vanoti vari kukunda zvine mutsindo musarudzo yemutungamiri wenyika, uye mubatanidzwa wavo uchakundawo musarudzo dzenhengo dzeparamende pamwe nedzemakanzura.
VaMnangagwa Vovimbisa Kutambira Zvichabuda Musarudzo
Mutungamiri weZanu PF uye vari mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanoti ivo nebato ravo vachatambira zvichabuda musarudzo.
Vanhu Vove neTarisiro Yekuti Sarudzo Dzichaitwa muRunyararo
Asi nhengo yeZanu PF kuBuhera VaElisha Mutambara vanoti vanhu vachavhota murunyararo, uye vanofairwa kuvhotera bato rine nhoroondo inotevereka.
Chikunguru 27, 2018
VaManyenyeni Vanoti Hurumende Yaivhiringidza Mashandiro Avo
Meya weguta reHarare, VaBernard Manyenyeni, vanoti vakakundikana kuita basa ravo nemazvo sameya weguta sezvo paive nekupindira kwaiitwa nehurumende yeZanu PF uko kwaibvongonyodza mashandiro ekanzuru yavo.
Vagari Vochema Chema neKuwedzerwa kweNguva Inodzimwa Magetsi